Ungadliwa for face buso ekhaya - lena ulwazi oludingekayo ukuze ukwazi yonke intombazane. Indlela ngokushesha ukuqeda imibuthano ngaphansi amehlo futhi ubuyisele bahlole? Indlela ukuhlanza futhi moisturize isikhumba? Okufanele ukwenze ukususa ububomvu? He azi everything imithi yendabuko!
Ungadliwa for face buso ekhaya
Izimali balungiselela emakhaya abo kusuka izithako zemvelo, eziwusizo njalo, ngoba umkhiqizo uhlanzekile. lapha kuphela udinga ukwazi ukuthi kumele wenzeni. Ngakho, imikhiqizo ethandwa kakhulu ukulungiswa isimangaliso-zimali ukhukhamba, strawberry, ikiwi izithelo, amaqanda noju. Uhlanza buso ebusweni ekhaya uzilungiselele izithako ezilandelayo: ezihlangene kuphela iqanda omhlophe (ngoba impahla wasiphula kwesikhumba Pore ukungcola) nezinyosi (umkhiqizo kunomthelela eliphathisa kunamaqoqo amangqamuzana esikhumba efile). Sebenzisa le ngxube kumele ibe ubuso kancane ezimanzi imizuzu amabili, bese ukuvumela isikhumba ukuphefumula, bese Sula tonic ukubeka ukhilimu. Abaningi bathandile imaskhi ikhukhamba: tincetu lokhu yemifino is futhi abeke ebusweni imizuzu amabili. Ungakwazi ukupheka ukuxubana, ukuxuba in a blender le ikhukhamba kanye kiwi. Isivuvu Kugcine asenze kahle isikhumba. Okunomsoco buso ebusweni ekhaya kungenziwa kuphekwe ngesisekelo sitrobheli: amajikijolo ochotshoziwe ixutshwe noju ezimibalabala, ukwakheka lisetshenziswa ebusweni nasentanyeni isikhumba for isigamu sehora. Yilokho buso lelula kuzosiza ukwenza isikhumba bushelelezi, soft futhi emuhle.
Ungadliwa for face buso ekhaya: isikhumba nge uhlobo okuxubile
Lolu hlobo lwe-isikhumba kudinga ukunakekelwa okukhethekile, futhi ngenxa yalokho imaski ngoba kufanele kube ezahlukene, kuyoba ubumba ewusizo, egg elimhlophe noju lwezinyosi. Clay ngokuvamile exutshwe kalamula, ngoba ikuvumela mhlophe ebusweni, kanjalo nokususa iminonjana induna. Kodwa amaprotheni sisetshenziswa ngefomu okumsulwa ekhaleni Sweaty, ngoba uba isiponji ngoba namaqhubu. Uju isetshenziswa exfoliate isikhumba sengozini.
Isici esiphawulekayo iyiphi buso ekhaya wukuthi kufanele uzilungiselele ngokuqinile ngaphambi kokufaka isicelo. Okungukuthi, uma ushiye uthathe usuku olulodwa noma ezimbili, wonke umphumela kulahleka. Esinye isici - phakathi naleyo nqubo kuyinto efiselekayo esimweni esikhululekile umile (elele kusofa, isibonelo). It is ibuye Kunconywa ukuthi ukugcina zonke izithako imaski esizayo kule esiqandisini, ukuqinisekisa ukuthi imikhiqizo bangaveziwe izici ezingezinhle. Esinye isici zonke buso yemvelo iyindlela umdwebo: kuzomele uqale ukusebenzisa ingxube ebusweni bakho, entanyeni decollete ke Ukuthepha nokuhamba kwezindikimba iminwe "ukushayela" okuqukethwe ekujuleni isikhumba.
Ungadliwa for face buso ekhaya - kuba Imininingwane kubalulekile kumuntu ngamunye nowesifazane; Nobuhle - ziwumthwalo futhi zobumnandi, futhi yonke izithako ezidingekayo Ungahlala kungatholakala efrijini. buso Yemvelo kuzosiza ukuxazulula izinkinga ezivelayo, zinjalo nje kuhle ukugcina ebusweni nasemzimbeni ithoni kanye nezempilo.